Zava-dehibe ny torohevitra ara-dalàna amin'ny fifanarahana orinasa any Dubai, UAE 00000
Zava-dehibe ny torohevitra ara-dalàna amin'ny fifanarahana asa any Dubai, UAE
Leave a Comment / mpiaro, Blog, Business Law, Mpisolovava ao Dubai, dalàna / By Sarah
Fifanarahana ara-barotra any Dubai, UAE
“Amin'ny faran'ny andro dia samy tompon'andraikitra amin'ny fifanarahana nataony avy ny tsirairay. Tsy nisy nanery anay hanao sonia azy ireo. ” -Mats Hummels
Great fifanarahana orinasa ifotoran'ny fahombiazan'ny orinasa rehetra ary antenaina ny hiantoka fa hanaiky ny lalàna maoderina mifandraika izy ireo. Ny fifanarahana fandraharahana toy ny fifanarahana rehetra dia fifanarahana eo amin'ny orinasa sy ny solontena iray izay mamaritra ny fanoloran-tena sy ny tombontsoan'ny antoko tsirairay.
Ity fifanarahana ity dia mety hiakatra amin'ireo rafitra samihafa miankina amin'ny hevitry ny orinasa, ny fifandraisana misy eo amin'ny roa tonta, ary ny adidy sy ny zony. Na inona na inona tsy misy fe-potoana voafetra, hihena ny iray amin'ny lalàna.
Noho izany, nohamafisina ny fifanarahana mba hanana fifanarahana mametra teny mazava mifanaraka amin'ny ilain'ny fifanarahana nataonao. Ny tena zava-dehibe dia misy fepetra takiana tanteraka mba hifanarahana ny fifanarahana fandraharahana ary ho hitan'ny lalàna.
Ny fananana torohevitra ara-dalàna momba ny fifanarahana momba ny orinasa dia afaka miantoka ny vahaolana amin'ny olana mifandraika amin'izany.
Maninona no ilaina ny torohevitra ara-dalàna raha resaka fifanarahana?
Misy singa marobe amin'ny asa sy ny solontenany dia tokony hiheverana ny fiarovana azy. Ny fananana fifanarahana arahin'ireo torohevitra ara-dalàna ho an'ny fifanarahana no fomba tena tsara indrindra ahafahana manome antoka fa nampidirina avokoa ny zava-drehetra.
Ny mpisolovava iray dia manana fahafaha manavaka ireo teny rehetra izay mety ho ratsy Ny antony dia noho ny fitenenana ara-dalàna, tsy ho hainao tsara ny manavaka rehefa ampahan'ny tsy fifanarahana iray ny ampahany amin'ny fifanarahana iray. Ny mpisolovava iray dia mety hiteraka rehefa misy fifanarahana tsy manome toky amin'ny tombontsoanao ary afaka mandrisika anao tsy hanaiky ireo teny ireo.
Tanteraka ny fenitra farany ambany indrindraNy fifanarahana orinasa dia tsy maintsy manaiky ny fepetra fototra voalaza ao amin'ny fenitra momba ny asa, izay mamaritra ny mari-pahaizana 10 kely indrindra tokony homena ny solontenan'ny rafitra nasionaly rehetra. Ny fifanarahana dia tokony hanaiky ny fanomezana, fifanarahana amin'ny asa aman-draharaha, na fanambarana hafa voasoratra anarana izay mihatra, ny mpampiasa dia tsy maintsy manome toky fa fantany ny adidiny ara-dalàna. Manokana indrindra dia ilaina ny mahafantatra raha azo antoka amin'ny alàlan'ny fanomezana nasionaly na WA ny solontena ary manome toky fa tsy miovaova ny tahan'ny karama sy ny fanoloran-tena samihafa takiana amin'ilay loka mendrika.
Ny fifanarahana na fifanarahana dia tokony hapetraka raha jerena ny filan'ny antoko sy ny fepetra takiana mba hahafeno ny fepetra farafahakeliny.
Matetika ny mpampiasa sy ny mpiasa dia manandindona ny tenany amin'ny format tsy miangatra fa tsy ambara fa nalaina tamina tranonkala. Ireo dia mety tsy ho lany andro ary tsy hanilihana ireo singa ilaina amin'ny fananganana ny fe-potoam-piasana. Ny fifanarahana mendrika ho an'ny filana ankolafy manokana dia ilaina indrindra amin'ny fanatanterahana ny fifanarahana ary amin'ny fifandraisana ara-barotra mahazatra.
Voamarina fa mahay tsara ny mpisolovava amin'ny resaka fifanarahana. Fitaovana miaraka amin'ny fahalalana hain'izy ireo mampisaraka sy manazava amin'ny antsipiriany ny tontolon'ny fifanarahana ara-barotra nifanaovan'ny antoko. Afaka manazava aminao ny mpisolovava hoe inona ny teny tokony hampidirina ao anaty fifanarahana ho an'ny toe-javatra iainanao manokana, ary manadihady ny andalana tsirairay mba hiantohana fa mifanaraka tsara izany.
Mihena sy fanemorana
Ny tribonaly, ny filankevitra na ny vaomiera dia hanadihady matetika ny fifanarahana asa raha manapa-kevitra raha nisy famaranana na famerimberenana natao momba ny fifanarahana fandraharahana ary raha mitombina izany. Ny antoko dia tokony hiaro tena amin'ny alàlan'ny fiantohana ny teny momba ny farany sy ny fihoaram-pefy dia mazava tsara ary manan-tsaina.
Ny orinasan-dalàna momba ny asa dia afaka manome fanazavana anao hanomezana toky fa voatondron-kevitra araka ny antonony ireo teny ireo.
5. Famerenana ny famerana ny fehezan-dalàna
Ireo mpiasan'ny asa aman-draharaha dia manana toerana tombony sy hery amin'ny alàlan'ny hatsaran-tarehiny, noho ny fahitany ny angon-drakitra voasokajy, ny endrika, ny fomba, ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa, ny zava-misy ao anatiny ary ny fananana ara-tsaina. Izany dia mety hanolotra fiakarana ho adidy fiduciary amin'ny mpiasa.
Ankoatr'izay, ny toe-javatra tsy mifaninana na tsy varotra ary ny fifehezana ny varotra dia manandrana misolo tena ny solontena amin'ny fangatahana sy ny fanakorontanana ireo mpanjifa ary ny mpiasa samihafa ary koa aza misoroka ny angon-drakitra saro-pady.
Amin'ny tranga sasany amin'ny tranga manokana, ohatra, raha ny mpiasa no votoatin'ny orinasa, ny famerana dia mety hanakana azy ireo tsy hifaninana amin'ny orinasa aorian'ny asany. Na izany aza, amin'ny fepetra manokana fotsiny dia hampiharina ny proviso tsy misy atiny.
Amin'ny tranga rehetra, ny fehezan-dalàna fameperana dia tsy maintsy ampanjifaina tsara mba hiarovana ny tombontsoan'ny orinasa ara-dalàna, raha tsy izany dia tsy azo ampiharina. Raha toa ka miparitaka be loatra ny fameperana, na eo aza ny zava-misy fa mety hanarona olona marin-toetra amin'ny tombontsoa ara-dalàna izy ireo, dia mety hihazona azy ireo ary tsy misy filaminana. Izay no antony maha-tena ilaina ny torohevitra ara-dalàna.
Ny lalàna manodidina ny fetran'ny fehezan-dalàna dia tena tsy azo vinavinaina. Ny karazana fetra tokony hatsangana sy ny fomba handikana ny andininy sy ny fanarahana azy dia miankina amin'ny orinasa sy ny ampahany tazonin'ny mpiasa. Ilaina ny toro-hevitra ara-dalàna mba hahitanao an'ity ampahan'ny fifanarahana fandraharahana ity ary hialana amin'ny olana any aoriana.
Amin'ny alàlan'ny fananan'ny mpisolovava mandinika ny fifanarahana nataonao dia azonao antoka fa hiatrika ny olana tsirairay misy ifandraisany izy. Ny fifanarahana dia maneho ny fifampiraharahana amin'ny orinasa izay mety ho be pitsiny miaraka amin'ny fahasarotana maro na valiny manaitra. Ny fifanarahana dia tokony hametraka tanteraka izay mitranga sy ny zonao amin'ny toe-javatra toy izany, ary koa ny fomba tokony handaminana izay adihevitra rehetra.
Ny mpanolotsaina ara-dalàna ara-dalàna iray izay nibaiko fifanarahana isan-karazany dia hanana fahaizana mijery mialoha ny fahasarotana azo tsapain-tanana ary manome toky fa ny fifanarahana nataonao dia mety hitrangan'izany toe-javatra izany miaraka amin'ny tanjona fa azo antoka tanteraka ny tombony azonao. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, raha tsy voavaha ny fifanarahana tsy fifanarahana ao amin'ny fifanarahana orinasa dia mety hiditra amin'ny fitsarana any Dubai ny mpisolovava fanelanelanana.